विकासमा नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको भूमिका फराकिलो पार्नुपर्छः नागरिक अभियन्ता – इन्सेक
विकासमा नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको भूमिका फराकिलो पार्नुपर्छः नागरिक अभियन्ता
दोलखा ०७५ पुस ११ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश ३ को आयोजनामा पुस १० गते चरिकोटमा विकासमा नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा हुराडेक नेपाल दोलखाका अध्यक्ष होम पाठकले नागरिक समाजको अवधारणा, नागरिक समाज के हो ? नागरिक समाजमा कोको हुन सक्छन् ?, नागरिक समाजको आज सम्मको भूमिका, नागरिक समाजको आवश्यकता ? जिल्लामा नागरिक समाजको क्रियाशिलता, हाल स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, र सञ्चार जगत विचमा सम्बन्ध कस्तो रहेको छ । विद्यमान अवस्थामा नागरिक समाजल सञ्चारकर्मी साझा कार्यभार के हुन् सक्छन् ? लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ दोलखाका अध्यक्ष जीवन लामाले सञ्चारकर्मीले एउटै विषयमा प्रशारण गर्ने सामग्रीले थप अन्योलता सिर्जना गरेकाले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई त्याग्दै गुणस्तरीय र सत्यतथ्य समाचार दिनुपर्ने बताए ।
गैसस महासङ्घ दोलखाका सचिव दिलबहादुर केसीले नागरिक समाज विभक्त हुन लागेकोले आम नागरिकको चासोका विषय ओझेलमा परेको बताए ।
केसीले सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजको एकता प्रयासले विकासमा उपलब्धिमुलक परिणाम हासिल गर्ने बताए ।
'नागरिक समाज र सञ्चारकर्मी आम नागरिकको भरोसाको केन्द्रमा रहन सकेनन् । भरोसायोग्य कामले मात्र समुदायको प्यारो बन्न सकिन्छ ।'-ग्रामिण विकास टुकी सङ्घका कार्यकारी निर्देशक पुर्षार्थ श्रेष्ठले भने ।